Ezona zixeko zintle zintle eMorocco | Ukuhamba kwe-Absolut
Ezona zixeko zintle zintle eMorocco
Epheleleyo umbala, ukufudumala kunye nomtsalane, IMorocco ikhupha ubuhle, ukusuka kwiiNtaba zeAtlas ezibabazekayo ezihamba kwilizwe liphela, nolwandle oluqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka olubekwe ngokuchasene nomthubi kunye negolide yentlabathi yasentlango. Eli lizwe likhaya leedolophu ezininzi ezintle, ngasinye sidibanisa Indawo eyodwa kunye nenkcubeko yaseMorocco.
Sijongene ne ilizwe eligcwele imbali kunye nenkcubeko esinokuyifumana kwikona nganye kwaye, ngaphezu kwako konke, kwizixeko zayo ezifihlakeleyo. Ukuba ujonge i Iindawo ezintle zokundwendwela okanye ukunqamula eMoroccoNalu uluhlu lwakho olulungileyo lokugcina umkhondo.
Idolophu entle yolwandle Kunxweme olusenyakatho yelizwe, i-Asilah inembali etyebileyo eyahlukeneyo. Ngeengcambu ezisusela kwinkulungwane ye-XNUMX, xa yayiyeyona ndlela iphambili yorhwebo eyayisetyenziswa ngamaFenike, kamva yathinjwa ngamaPhuthukezi ngaphambi kokuba ibe phantsi kolawulo lweMoroccan ngenkulungwane ye-XNUMX.
Inkcubeko nganye eluntwini ishiye uphawu lwayo esixekweni, ke namhlanje, UAsilah Umboniso onomdla welifa elikhethekileyo laseMorocco. Inqaba yamaPhuthukezi iyame ngokungxama emaweni, ngelixa izindlu ezimhlophe nezimhlophe zaseMoroccan zihamba ezitalatweni.
Ime kwindawo entle Rif iintaba kumantla eMorocco; Chefchaouen yaziwa ngokuba yayo ukubetha izindlu eziluhlaza okwesibhakabhaka ebekwe kwindawo yokukhusela eluhlaza kunye nomdaka weentaba zomhlaba.
Iingxangxasi zeedolophu ezantsi kwentaba, inqanaba ngalinye elitsha libonisa ezona zakhiwo zikhethekileyo, izityalo ezimibalabala, kunye neekhefi ezinomtsalane. Indawo endala yesixeko ichukunyiswe ngamandla yi Uyilo lweAndalusian kunye namaSilamsi, Ukusuka kwiindonga ezipeyintwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nophahla lweethayile ezibomvu, ukuya kwiminyango enesithintelo semingxuma kunye neendlela zokuhamba ezinqatyisiweyo esixekweni.
Ngaphandle kokuthandwa kwayo kwezorhwebo kunye nokwanda kwabakhenkethi, Chefchaouen ihlala iyindawo efanelekileyo yokufumana iMorocco ubuntombi kwaye wahlukile.
Ifumaneka kwi Unxweme olusentshona yeMorocco, kulwandle oluqaqambileyo kunye namanxweme aselwandle athambileyo, Essaouira Enye yezona mfihlo zigcinwe kakuhle eMorocco, ubukhulu becala ikhusela izihlwele zabakhenkethi abafuna ilanga ngenxa yeemo zayo zomoya. Ngaphandle kobuhle bendalo obujikeleze isixeko uqobo Essaouira iyaphawuleka kwizakhiwo ezinomtsalane, iisokisi ezinomtsalane, kunye nezibuko eliphithizelayo, zizele ngamaphenyane anemibala.
Ukusuka ezibukweni iindonga zesixeko zinyuka, zijikeleze iindawo zentengiso enemibala, izindlu ezimhlophe kunye nezitrato ezijijekileyo. Iindonga zedolophu nazo zinembonakalo entle yendawo engqongileyo, ukusuka izakhiwo ezihlangeneyo zedolophu ukuya kwi- Iiparagrafi Iiles Mgama.
Njengo isixeko sesibini ngobukhulu eMorocco, FesNangona kunjalo, isenayo yonke into enomtsalane kunye neempawu zesixeko esincinci kakhulu. Isixeko sine iimedinas ezimbini zakudala, enye yazo - UFes el Bali -Ichongwe njengeNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi ngenxa yeendawo zayo ezintsonkothileyo zokujija, iisokisi, iiyadi, kunye neyunivesithi yakudala emhlabeni.
Isixeko xa sisonke siqhayisa ngemizekelo emininzi yobugcisa bokwakha bamaSilamsi, ukusuka kumaxesha amandulo ukuya kwii-mosque ezinkulu, zonke zihonjiswe kakuhle ngeethayile kunye neearabies, ezenza isixeko sibe ngumyuziyam ovulekileyo.
Ifrane sesinye sezixeko ezimangalisayo eMoroccoIfana nedolophu yaseSwitzerland esezintabeni ngaphezulu kwedolophu yelizwe eliyintlango kunye nolwakhiwo lwamaArabhu. Ubuhle bale mihla besi sixeko bufanelekile ubukhulu becala kwi Ukoloni lwaseFrance, owakha isixeko njengendawo yokubalekela kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni, i-Ifrane imi kwiiNtaba zeAtlas ezinekhephu ebusika.
Kunye namaqela omtsalane we Iitshishini eziphefumlelweyo zaseYurophu, isixeko kwaye sibonile ngenani elikhulu leepaki kunye neegadi, sidala indawo yokugcoba kunye noxolo ngaphakathi kuxakeka lobomi baseMorocco.
Esinye sezixeko ethandwa kakhulu eMoroccoIMarrakech ibe yindawo engenakuphepheka kule minyaka idlulileyo kwabo banqwenela ukufumana amava ubuhle bembali yaseMorocco kunye nenkcubeko. Isixeko esidala sidume ngeentengiso zayo ezininzi, kunye nomgaqo wee-alleys kunye neesouks ezibonisa ubuncwane obutsha kuyo yonke indawo-kubandakanya iziqholo ezinuka kamnandi, amalaphu amibalabala, izibane ezibengezelayo kunye nobucwebe.
Imekobume ejikeleze isixeko inomtsalane ngokulinganayo, njengentlango ekhawulezayo yentlango esolula esixekweni, wonwabele ukoneliseka ziintaba zeAtlas ezigqunywe likhephu mgama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ezona zixeko zintle zintle eMorocco
Iigadi ze5 zaseMarrakech ekufuneka uyazi